Ohabolana Angalisa zanaky ny tafondro : ny feon--drainy ihany no feon--janany. [Veyrières 1913 #956, Cousins 1871]
Ohabolana Atodin-tsorohitra amoron-dalana : tsy nariako, fa narian-dreniny. [Houlder 1895 #1042, Cousins 1871 #321, Veyrières 1913, Rinara 1974, Rajemisa 1985]
Ohabolana Katsakatsa-draty, sarangai-mitovy : mba mifanaja, fa zanak’ olo-mitovy. [Cousins 1871 #1237, Veyrières 1913]
Ohabolana Teren-doza, sa enjehin' antambo, no zanaky ny mpanan-karena ka mangataka ? [Veyrières 1913 #2562, Cousins 1871 #3083]
Ohabolana Tompony mba mihono, toa zanak’ anabavy. [Cousins 1871 #3121]
Ohabolana Tsy maninona raha zana-mamba lanin-drainy, fa lanin’ ny kibo nitoerana. [Cousins 1871 #3381]
Ohabolana Tsy mety raha manao andevovavy may trano: ny trano may tsy hitany, fa "Maty aho varin-janako !". [Cousins 1871 #3433]
Ohabolana Tsy misy mamy noho ny zanaka ; fa raha manaikitra ny nono, akifika. [Cousins 1871 #3528, Nicol 1935 #180]
Ohabolana Vonoy ny zanakareo raha teraka Alakaosy. [Veyrières 1913]
Ohabolana Zana-dambo mamindra : tsy hery fa mihafy. [Houlder 1895 #909, Rinara 1974 #5079, Cousins 1871 #3757]
Ohabolana Zanak' olo-mianadahy no mivady : sarotra mifanao itena! [Veyrières 1913 #68, Rinara 1974 #5083, Cousins 1871 #3758]